Bụ nri kacha njọ maka ụmụaka | Bezzia
Kedu nri kacha njọ maka ụmụaka
Maria José Roldan | 01/10/2021 22:57 | Ndị nne ndụmọdụ
Ndị nne na nna kwesịrị inye ọrụ dị mkpa maka nri ụmụ ha. Ọ dị mma na ebe ọ bụ na ha dị obere, ụmụaka na -agbaso àgwà kwesịrị ekwesị ma a bịa n'ihe oriri. Ha ga -amatarịrị oge niile ihe dị mma maka ahụ ha yana ihe na -emerụ ahụ.
N'isiokwu na -esonụ, anyị ga -ekwu maka ya nri ndị ahụ na -emerụ ahụ ma na -emebi ahụike nwa ahụ.
1 Ihe ọicesụ Juụ
3 Koko ntụ ntụ
4 Achịcha ụlọ ọrụ
5 Nri edozi
Ihe ọicesụ Juụ
Ihe ọ Juụicesụ bụ nri nwere carbohydrate nwere ọtụtụ shuga dị ka glucose na fructose. Ị consumptionụ ihe ọicesụicesụ dị ukwuu nwere ike ime ka ụmụaka bute ọrịa shuga na nsogbu ibu n'ime oge ọkara. Dị ka ihe ọzọ maka ihe ọ juụ juụ, nhọrọ kacha mma bụ mmiri ara ehi ma ọ bụ mmiri.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ọka a na -ahụ na nnukwu ụlọ ahịa, nwere ntakịrị ihe oriri na -edozi ahụ ma baa ọgaranya na shuga. Ọ bụ ihe nwute na n'agbanyeghị ihe ahụla, ọ bụ ngwaahịa kpakpando na nri ụmụaka. N'ihe banyere inye ụmụaka nri ọka, nhọrọ kacha mma bụ ọka. Ọ bụ nri nwere nnukwu onyinye ume nke na -enye anụ ahụ eriri dị mma.
Koko ntụ ntụ
Ihe oriri ọzọ kacha ewu ewu na nke kacha emerụ ụmụaka bụ koko ntụ ntụ. Nwata na -anaghị eri nri ụtụtụ na iko mmiri ara ehi na koko nwere soluble adịghị ahụkebe. Dị ka ngwaahịa ndị ahụlarịrị n'elu, koko soluble anaghị enye nri ma nwee nnukwu shuga. Nhọrọ kacha mma bụ ị were koko kpamkpam na ịdị ọcha 100%.
Achịcha ụlọ ọrụ
Nri ole na ole na -emerụ ma na -emerụ nwatakịrị ahụ dị ka achịcha ụlọ ọrụ. Ndị a bụ ngwaahịa nwere nnukwu abụba abụba na shuga dị mfe. Ị consumptionụbiga mmanya ókè nke achịcha achịcha a, nwere ike ibute nnukwu nsogbu ahụike maka obere na ọkara na ogologo oge. Nke kachasị mma bụ ịhọrọ mkpụrụ osisi ma ọ bụ ntụ ọka ntụ ọka n'ihi na ha nwere ahụike karịa.
Ihe oriri ndị a nwere ọtụtụ ihe mgbakwunye ma baa ụba na abụba abụba na nnu. Ọ bụ ya mere ekwesịrị iji kpochapụ ngwaahịa dị otú ahụ na nri nwa ahụ kwa ụbọchị wee na -ahọrọkarị nri ụlọ a na -esi na ihe ndị sitere n'okike na -enweghị ihe mgbakwunye dị ka akwụkwọ nri, azụ ma ọ bụ akwa.
Na nkenke, ndị a bụ ụfọdụ nri na -ekwesịghị ịdị na nri ụmụaka ma ọ bụ ụmụaka. Ihe kacha mma n'ọnọdụ ọ bụla bụ ịhọrọ nri eji eme ụlọ nke emere site na nri ọhụrụ dị ka akwụkwọ nri ma ọ bụ akwụkwọ nri. Ndị nne na nna ga -amatarịrị oge niile maka onyinye nri na -enye ụmụ ha.
Ezi nri ziri ezi na -adabere ma nwata ahụ nwere ike ito eto n'ụzọ dị mma na enweghị nsogbu ahụike. N'ime agụmakwụkwọ, àgwà iri nri dị mma kwesịrị ịrụ ọrụ dị mkpa, na -enye nwata ohere iri nri nke ọma. Iri nri nke ọma dịka ụmụaka na -eme ka ha mata n'ime afọ gara aga ihe na -emerụ ahụike ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Ndị nne ndụmọdụ » Kedu nri kacha njọ maka ụmụaka
Iwu 3 nke efu efu
Akwa akwa iji yie okpokoro mgbụsị akwụkwọ gị